I-Golfer Tommy Bolt: I-Club-Throwing - kunye ne-US Open-Champ
I-Golfer uTommy Bolt yaziwa ngokuba yi-swing sweet and non-so-sweet temper. Kodwa uhlala ebeka imbonakalo emihle kubathengi.
Iminyaka yakhe njengomqhubi wePGA Tour ininzi kwiminyaka yee-1950 kwaye yaquka intshontsho ye- US Open Open . Kamva, uBolt wabandakanyeka kwisiganeko esinceda ukuqalisa iNtambo yeeMidlalo.
Umhla wokuzalwa: Matshi 31, 1916
Indawo yokuzalwa: Haworth, e-Oklahoma
Umhla wokufa: uAgasti 30, 2008
Isiteketiso: "I-Tommy eyoyikisayo" ngenxa yengqondo yakhe. Ngamanye amaxesha kuthiwa "Ukuduma" (kunye neendudumo) ngenxa yesizathu esifanayo.
Inani leMpumelelo nguTommy Bolt
I-PGA Tour: 15
(Ukunqoba kweBolt kuboniswe ngezantsi.)
Amabhaso kunye neNhlonipho kaTommy Bolt
Ilungu, iqela le-US Ryder Cup , ngo-1955, ngo-1957
Ilungu, iWorld Sports Hall of Fame
Biography kaTommy Bolt
UTommy Bolt waqalisa umsebenzi wakhe wePGA Tour ngokukhawuleza, kodwa wanqoba ngokwaneleyo-kwaye wakhilela ingqalelo ngokwaneleyo-ekugqibeleni wavotelwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama. Kodwa ngaphezu kokuba umdlalo wakhe, ke, uBolt wayaziwa ngokubonakalisa kwakhe nomsindo wakhe - umsindo owawunamagama amaninzi athi "iTrimeble Tommy" kunye ne "Thunder Bolt."
I-Bolt yayiyi-thrower rhoqo yeeklabhu kwikhosi. Kwiminyaka kamva, uBolt wabonakala ezisola ngokuba waziwa ngokuba ngumsindo weqela. ngoxa wayesemsebenzini, wayedla ngokudlala.
"Ndiqalise ngaphezulu kakhulu (iiklabhu) kuba bekulindele ukuba ndibe ngaphezu kokuba ndiyenze ngenxa yokuba ndibuhlungu nantoni na engazange ihambe ngegalufu yam," iBolt icatshulwa ngokuthi ngeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi.
Emva kwexesha elithile, yaba ngumbukiso, elula kwaye elula.
Nangona kwakumsindo kunye neengqungquthela, kunye nezivunguvungu zangezinye izihlandlo ezazithengisa kakhulu, uBolt wayehlonishwa ngontanga yakhe njengomnye wabadlali ababalaseleyo ababenokubona .
I-Bolt ifinyelele kwigalofu njengomntu oneminyaka eli-13 ubudala. U-Al Espinosa, olahlekelwa nguBobby Jones ngo-1929 US Open, watyelela iklabhu apho iBolt yayifake khona.
UBolt wachukunyiswa gqitha ngengubo ye-Espinosa kunye nendlela awayezimisele ngayo ukuba abe yi-golfer yobugcisa.
Qala ngokuQala kwiPro Golf
Lelo phupha lalilibaleka kaninzi, nangona kunjalo. UBolt wachitha iminyaka emine e-US Army ngexesha leMfazwe Yehlabathi II (ngo-1945 ekhonza njengenhloko yeqela kwiqela elikhululwe eRoma).
Emva koko wahamba phakathi kwegalufu kunye nomsebenzi wokwakha.
Ekugqibeleni wajoyina i-PGA Tour full-time eneminyaka engama-32. Uloyiso lwakhe lokuqala lwafika ngokukhawuleza ngo-1951 weNtshonalanga ne-South Open Championship. I-Bolt yaphumelela kathathu ngo-1954 nangama-1955, ke iqela elikhulu laqala ukufika kumdlalo wakhe. UBolt wasebenzisa u- Ben Hogan , owayesitshintsha uBolt waza wanceda unyango.
I-Bolt iwina i-US Open 1958
Emva koko, eneminyaka engama-40 ubudala, uBolt wayinqoba i-1958 US Open kwi- Southern Hills e-Oklahoma.
I-Bolt inomqhubi wokuqala we-1 emva kwesibhozo esingama-36 ngaphezulu kweGary Player oneminyaka engama-22 ubudala, owayedlala i-US Open okokuqala. Ukulandela i-69 kwinqanaba lesithathu, uBolt welula ukukhokela kwakhe kwindawo yesibini ( uGene Littler , ngeli xesha) kwiintlobo ezintathu.
I-Bolt ivalwe ngamanqaku angama-72 kwaye iphumelele ngumdlali ongu-4. Kwakuyi-ntshatsheli yokuqala edlalwa kwiSouth Hills, kwaye u-Oklahoman wasekuhlaleni wayinqoba.
Ukunceda Ukuqalisa iTyelelo leMatriki
UBolt waqala ukukhawuleza ekutyekeni kwakhe emva kokuwina i-US Open, kwaye ukunqoba kwakhe kokugqibela kwePGA Tour kwaba ngo-1961.
Waya kuphumelela u-1969 we- PGA Seniors Championship , kwaye wadlala indima ephambili ekudalweni kwe-Senior PGA Tour.
Ngowe-1979, i-Bolt yadibanisa ne- Art Wall kwi-First Mutual Legends of Golf, apho la mabini alahlekelwa yimithwalo emithandathu enomxholo othi uJulius Boros noRoberto De Vicenzo. Ngomnyaka ozayo, iBolt kunye neWall zaphumelela umdlalo.
Esi siganeko saba nemilinganiselo enhle yeTV yakubon 'ukuba iqinisekise i-PGA Tour Commissioner uDeane Beman ukuxhasa ukudala ityelelo kubadlali begalufu abaphezulu, kunye neTour Tour - esiyibiza ngokuba yi-Tour Tour.
I-Bolt yavotelwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeFame yiKomiti yee-veterans ngo-2002.
Njengokuba siyazi, i-Bolt yiyona kuphela i-golfer echwephepheni ... nanini ... ukuba ihlawuliswe ngokunyaniseka .
I-Bolt yayiyi-golfer yesihlanu kwimbali ye-PGA Tour ukufumana amanqaku angama-60 . Wenza oko ngo-1954 kwisiXhorensi seNkushuwalense evulekileyo. Kwaye emva kokuvula i-64-62 ngo-1954 iVirg Beach Beach, i-Bolt ixesha elibanjelwe irekhodi le-36-pit hole.
Ezinye zeengcaphuno zeTommy Bolt zihambelana nomsindo wakhe kunye nomkhuba wakhe wokuphonsa iiklabhu zegalufu, ezifana:
"Njalo uphonsa amaklabhu phambi kwakho, ngaloo ndlela awuyi kuchitha nantoni na ukubuyela kuyo ukuze uwathathe."
"Ungalokothi uphule umqhubi wakho kwaye ubeke umjikelezo omnye."
"Ndiyazi ukuba unako ukuhlawuliswa ngokuphonsa iqela, kodwa ndifuna ukwazi ukuba unako ukuhlawuliswa ukuphonsa i-caddy."
Amanye ambalwa amazwi aseBolt:
"Egalufini, ukushayela ngumdlalo wokulawulwa kwemisipha ngokukhululeka, ngeli xesha ukubeka into efana nokwenza ukuhlinzwa kwamehlo nokusebenzisa isitya sezonkwa kwi-scalpel."
"Ingqondo igxotha ngaphezulu isibhamu ngaphezu komzimba."
"Akukho mdlalo ongcono kwihlabathi xa unenkampani enhle, kwaye akukho mdlalo ogqithiseleyo xa unenkampani embi."
Kwaye iimbono ezimbalwa malunga neBolt ngabakhuphisana nabo:
UJimmy Demaret : "I-Bolt's putter iye yachitha ixesha elingaphezulu emoyeni kuneLindbergh."
UBen Hogan: "Ukuba sasiyifundile enye intloko emagxeni akhe, uTommy Bolt wayebe ngumkhulu kunabo bonke abaye badlala."
I-PGA Tour Win by Tommy Bolt
Ngo-1951 eMntla naseMzantsi
1953 I-San Diego Vula
1953 iTucson Open
Ngo-1954 i-Miami Beach International I-4-Ball (iqela leendiza, lidibene noDick Mayer)
1954 ISixeko seNtshumo
1954 I-Rubber City Open
Ngo-1955 iConvair-San Diego Open
1955 USt. Paul Vula
1958 Umemo weSizwe wobuKoloni
1960 Memphis Iimemo ezivulelekileyo
1961 I-Pensacola Vula isimemo
I-Niels Bohr kunye neManhattan Project
Amaxwebhu angama-5 aphezulu malunga neComputer Industrial Complex
Ixabiso leMkhankaso ka-Obama?